July 2021 - San Thitsa
ချောင်းအရမ်းဆိုးပီး ရင်ကြပ်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီနည်းလေးလမ်းညွှန်ပါရစေ
Zawgyi ချောင်းအရမ်းဆိုးပီး ရင်ကြပ်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီနည်းလေးလမ်းညွှန်ပါရစေ တကယ်ကြီးသက်သာတာနော် အပိုမပြောဘူး ချောင်းအရမ်းဆိုးပီး ရင်ကြပ်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီနည်းလေးလမ်းညွှန်ပါရစေ.. ကိုယ်တိုင်လဲ တပတ်လောက်ချောင်းဆိုးလို့ ဒီနည်းလေးနဲ့ပျောက်ခဲ့တာလက်တွေ့ပါပဲ.. အလွယ်ကူဆုံး သဘာဝနည်းလမ်းလေးကို ဝေမျှပါရစေ.. အရမ်းလွယ်ကူပီး ငွေကုန်သက်သာစေမယ့်နည်းလေးပါ.. ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းကတော့. လိမ္မော်သီး
” နေမကောင်းရင် ဒီယ.တြာလုပ်ပေးပါ”
Zawgyi ” နေမကောင်းရင် ဒီယတြာ လုပ်ပေးပါ” အမြန်ဆုံးနေကောင်းသက်သာစေတဲ့ ယတြာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကိုစောင့်သော ကလျာဏီနတ် ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ ၃၇ ခေါက်ကို မနက်တိုင်း ရွတ်ပြီး မေတ္တာပို့ပေးပါ။ အသက်ကို စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက် သေဘေးကြုံရင် ကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။အညွှန့်တွေ ရှာရခက်တယ်
အောက်စီဂျင်မဝယ်နိုင်တဲ့ ဖခင်အတွက် လေထိုးတံနဲ့ အသက်ရှုလို့ရအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ ၆ နှစ်အရွယ်သမီး လေး
Zawgyi အောက်စီဂျင်မဝယ်နိုင်တဲ့ ဖခင်အတွက် လေထိုးတံနဲ့ အသက်ရှုလို့ရအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ ၆ နှစ်အရွယ်သမီး လေး တစ်ချို့ကလေးတွေဟာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် သိတတ်လွန်းပါတယ်။သူတို့လေးတွေဟာ အခက်အခဲတွေ ကြုံနေရတဲ့ အချိန်မျိုးဆိုရင် ဖြူစင်နဲ့ နှလုံးသားလေးတွေနဲ့ ခံစားပေးနိုင်ကြပါတယ်။ အခုလည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက
“သူနေ့စဉ်သောက်သုံးနေကြဆေးနည်းတစ်ခုကို မျှဝေလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်”
Zawgyi “သူနေ့စဉ်သောက်သုံးနေကြဆေးနည်းတစ်ခုကို မျှဝေလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်” ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ဆေးကုသပေးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်က ယနေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့လူမူကွန်ယက်ကနေ ဆေးနည်းတစ်ခုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ “ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရမဲ့ ဝိဇ္ဇာတသိန်းကျော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးများ၏မေတ္တာဆေး ကျွန်တော်တို့မိသားစုလေးနေ့တိုင်းသောက်နေတဲ့ဆေးလေးပါ ။ လည်ချောင်းမှာရှိတဲ့ပိုးမွှားများကင်းစင်သလို ချောင်းဆိုးခြင်း ချွဲပူထခြင်း အသက်ရှူမဝသောသူများအနေ့ဖြင့်လည်း ဒီဆေးအငွေ့များအားပျင်းပျင်းရှူရှိုက်ပေးခြင်းဖြင့် အသက်ရှူမှု့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတာကိုလည်းခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
zawgyi အဖျားသက်သာသွားပေမယ့်နောက်ဆက်တွဲကို ဂရုစိုက်ကြပါ…. မနေ့က ဆုံးသွားတဲ့ အစ်ကို ဟာ ဖျားတာတွေ ဘာတွေ ပျောက်ပြီး သက်သာပြီး အတော်ကြာမှ ထမင်းစားနေရင် ရင်ဘတ်ထဲက အောင့်တယ် ဆိုပြီးတော့ ရုတ်တရက် ဆုံးသွားတာလို့ သိရပါတယ်။ တစ်ခြားသူတွေလည်း
zawgyi ထောင်ထဲမှာ ဆေးကုသဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အူဝဲရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ မင်္ဂလာပါ စာဖတ်သူ ပရိသတ်ကြီးရေ ယခု ဖော်ပြပေးမယ့် အ ကြောင်းအရာကတော့ ထောင်ထဲမှာ ဆေးကုသဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ မအူဝဲရဲ့ လက်ရှိ ကျန်းမာ ရေး အခြေအနေအ ကြောင်းပဲ
Zawgyi ရေ မသောက်ဘဲ ရေ အစားထိုးပြီး သောက်ပါ မြေအိုး သေးသေးလေးထဲကိုရေ မပြည့်တပြည့်ထည့်ပြီးမကျည်းသီး လက်တဆုပ်ခန့် ထန်းလျက် အလုံးသေးသေးလေးတွေ ၁၅လုံးခန့် ဆား ဇွန်းသေးသေး တစ်ဇွန်းခန့်အဲဒီ ၃မျိုးကို ဒီအတိုင်းထည့်ထားလိုက်တယ် မမွှေနဲ့ မွှေစရာမလိုဘူး
Zawgyi အပြင်မှာကြက်ပေါင်းရည်ဝယ်မရတော့ဘူးဆိုလို့ ကြက်ပေါင်းရည်လုပ်နည်းလေး ပြန်လည်၍ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ကိုယ်လည်းအပြင်မထွက်တာ ၁ပတ်လောက်ရှိပြီမို့ရှိတာလေးနဲ့လုပ်ပြထားပါတယ် ။ ကြက်ပေါင်းရည်ဆိုတာကြက်ကိုပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့အရည်ချိုကိုပြောတာပါ ။ ကြက်သား ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ နံနံပင်အမြစ်တို့လိုပါတယ်ကြက်သားကိုရေစင်အောင်ဆေးပါ နံနံပင်ရဲ့အမြစ်ကိုရေစင်အောင်ဆေးပါဂျင်းကိုအခွံခွာပြီး မထူမပါးလွီးပါ ကြက်သွန်ဖြူအမွှာကိုခွာယူပြီး ရေဆေးပါ(အခွံမခွာပါဘူးရှင် အခွံနဲ့တစ်ပါတည်းထည့်ပေါင်းမှာပါ ) ဇောက်နက်တဲ့ပန်းကန်ထဲကိုပန်းကန်လုံးအသေးလေးတစ်လုံးမှောက်ထည့်ပါ
Zawgyi စည်းစိမ်ဥစ္စာ ဆိုတာကွယ်လွန်ရင် ကိုယ့်နောက် မပါဘူးဟုဆိုကာ ရှိသမျှပိုက်ဆံ သိန်း ၁၅၀၀ ၇ရက် သား သမီးတွေအတွက် လှူဒါန်းကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ အဖွား ကွယ်လွန်ရင်ကိုယ့်နောက် မပါဘူးဟု ဆိုကာ ရှိသမျှပိုက်ဆံ သိန်း၁,၅၀၀ ၇ရက် သား
ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာမို့ အဆင်ပြေလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ
Zawgyi ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ သူ့ဆေးခန်းမှာလဲ လာသမျှ လူနာတိုင်းကို ပေါင်းအိုး အကြီးကြီးထဲ ထည့်ပြီး အယောက်ခြင်းစီတိုင်းကို ရှူနိုင်အောင် မြန်မာဆေးနည်း ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ သူ့ဆေးခန်းမှာလဲ လာသမျှ လူနာတိုင်းကို ပေါင်းအိုး အကြီးကြီးထဲ ထည့်ပြီး